टेस्लाको कार दुर्घटनामा अटोपायलट सक्रिय गरिएको थियो ग्याजेट समाचार
टेस्लाले पुष्टि गर्दछ कि मोडेल X क्र्यासको बेलामा अटोपिलट सक्रिय गरिएको थियो
एक हप्ता भन्दा पहिले यो पुष्टि भयो कि टेस्लाको मोडेल एक्सको साथ एक ड्राइभरको मृत्यु भएको थियो क्यालिफोर्निया मा एक दुर्घटना मा। यो दुर्घटना मार्च २ 23 मा भएको थियो। घातक दुर्घटनाका कारणहरू अज्ञात थिए, तर यो अनुमान गरिएको थियो कि ड्राइभर स्वत: पायलट सक्रिय थियो। केहि अनुसन्धान आफैं नै अन्त पुष्टि भयो।
वास्तवमा, टेस्लाले पनि यस तथ्यलाई अपडेटमा पुष्टि गर्यो। यद्यपि कम्पनी आफैले दुर्घटनाको बारेमा थप विवरण दिन चाहेको छ। किनभने उदाहरण को लागी, स्वत: पायलट उस समयमा सक्रिय थियो, र पनि दुर्घटना हुनुभन्दा अघि ड्राइभरलाई बिभिन्न दृश्य र श्रव्य सतर्कताहरू जारी गरिएको थियो.
कम्पनीले खुलासा गरेको छ कि दुर्घटना हुनुभन्दा छ सेकेन्ड अघि ड्राइभरको हातहरू स्टेरि wheel् व्हीलमा पत्ता लागेन। त्यसोभए कारको रेकर्डमा आधारित, त्यहाँ कुनै संकेत छैन कि यो व्यक्तिले दुर्घटना रोक्नको लागि कुनै कदम चालेको छ। बारम्बार मोडेल X प्रणाली चेतावनीको बावजुद।
टेस्लाले पर्याप्त विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ, त्यसैले दुर्घटनाको केहि विस्तृत विवरणहरू पहिले नै ज्ञात छ। स्वत: पायलट सक्रिय भयो भनेर पुष्टि गर्नुका साथै, यो पनि खुलेको छ कि ड्राइभर मैन्युअली परिचालित क्रूज नियन्त्रण न्यूनतम गर्न अनुकूलन। पूर्वनिर्धारित द्वारा यो मध्यम स्तरमा आउँछ। यसको कारण के हो अलर्ट जारी हुन्छ जब कार वस्तु बाट एक निकट दूरी मा छ।
कम्पनीले जोड दिन चाहान्थ्यो कि अटोपायलट प्रकार्य हालै बीटा चरणमा छ। यसको मतलब यो छ कि टेस्ला कारको ड्राइभर हर समय सतर्क रहनु पर्छ। किनकि यसले सधैं सही तरिकाले काम नगर्न सक्छ। केहि यस्तो देखिन्छ कि यस अवस्थामा केस भएको छैन।
अन्वेषणको बारेमा अरु धेरै थाहा छैन र यो लामो समय सम्म रहनेछ वा हुँदैन। सेल्फ ड्राइविंग कारहरू निश्चित रूपमा यी दुर्घटनाहरूको साथ आफ्नो उत्तम हप्ताहरूमा जान सक्दैनन्। हामीलाई आशा छ कि चाँडै नै टेस्लाले यस बारे फेरि अपडेट गर्नेछ।.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » टेस्लाले पुष्टि गर्दछ कि मोडेल X क्र्यासको बेलामा अटोपिलट सक्रिय गरिएको थियो
गुगलले केहि दिनहरूमा यसको ठेगाना छोटो पार्ने छ
सामसु्गले नयाँ नोटबुक and र नोटबुक note नोटबुक प्रस्तुत गर्‍यो